Ngwa ahịa ike
DIKA SUGAR 45 RBU 12.5K
DIKA SUGAR 45 RBU 25K
DIKA SUGAR 45 RBU 50K
DIKA SUGAR 45 RBU 75K
DIKA SUGAR 45 RBU 100K
OIL & GAS PRESES
YGBỌ NTY NTYKA NTYKA
ỌR ISA ANY IS B PR ANY. ANYA
SI Group bu ahia ahia ahia na nnabata ndi nwere ihe kariri iri afo abuo. SI Group nwere ọtụtụ kọntaktị kọntaktị na -eme ụwa niile na ikike iji nye obodo ma ọ bụ ụlọ ọrụ ihe ha chọrọ. Anyị na-ejikwa akpa na nnukwu mbupu Ngwa dị nro n'ụdị osikapa, shuga, soybean, ọka wdg. SI Group nwere ike inye aka mepụta ahịa nke adịbeghị mbụ na ọtụtụ mba site n'inyere gọọmentị aka iwebata ihe ọkụkụ ọhụrụ na usoro nnweta iji weta ahịa ụwa. Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị arịrịọ ndị akọwapụtara maka ngwa ahịa ọ bụla dị nro ka anyị ga-enweta ya.
Ngwa ahịa siri ike dị ka Iron Ore, Coal, Metalms, ọla kọpa na mmanụ na-enyocha ma ha dị n'agbanyeghị na SI Group. Anyị na gọọmentị na ụlọ ọrụ azụmaahịa gburugburu ụwa na-enwe mmekọrịta dị ogologo oge nke na-enye anyị ohere ịnye ezigbo ahịa n'ahịa asọmpi. SI Group na-ahụ maka ụlọ ọrụ niile anyị na-arụ ọrụ iji hụ na ha nwere ikike ịmezue azụmahịa nke ọma. Anyị na-anọchite anya ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ma na-enye azịza maka ha abụọ, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eweta ngwaahịa na-achọ ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ na ndị otu siri ike n'ahịa ahịa gị kpọtụrụ anyị taa.
SI Group bụ onye na - eweta Iron Ore, ọla kọpa, Kol, Ígwé Scrap, Mmanụ na ngwaahịa ọrụ ugbo gburugburu ụwa.
Kpọtụrụ anyị taa info@sigroupco.com ma nata nzaghachi n’ime awa iri abụọ na anọ.
E mepụtara sigharị SI Group ma kee ya na Switzerland iji gosipụta ngwa ahịa dị oke ọnụ ahịa nke a na-anọchi anya ọbara ọbara dị ka nkume dị oke ọnụ ahịa. Ngwa ahịa ndị a dị oke ọnụ ahịa a na-ahụ gburugburu ụwa na-esite na nke A kwadebere ma nyefee ụwa niile site na ụgbọ a n'ofe osimiri niile. Ọla ọcha jikọtara ndị ahịa na-acha ọbara ọbara na-anọchi anya arịa na ụzọ isi bugoo n'oké osimiri ise.
Copyright © 2020 | SI otu | Ikike niile echekwabara.